Hindi Af somali |Home Of Hindi Afsomali | Fanproj.net
Hindi Af Somali: Dhowaanahaan waxaa internetka soo ku soo batay website-yada filimada af somaliga. websiteyadaan oo intooda badan laga daawado filimad hindi af somali, ama aflaamta hindiga, ayaa waxaa ku jiro qaar ay ka buuxaan, walxaxa qariba computerka. Inkastoo aniga aanna jecleen inaan magacaabo, website yadaas waxaa kamid ah, kuwa markaad gasho kadib, balaayo iska soo dabab furanta. waana in layska ilaalshaa websiyada noocaan ah waayo waxay dhaawac ugeysan karaan computerkaaga.
Sidoo kale waxaa jira kuwa aad u fiican oo waxaad dooneyso aad kadaawan kartid adigoon wax dhib kala kulmin. Wax dhib ah waxan ula jeedaa, inaada virus kaaga imaanin. websiteyadaan oo hindi afsomali full movies laga daawan karo ayaa waxaa kamid ah sida mysomali.com ama fanproj.net
Haddaba ma dooneyno inaan si gaar ah u magacawno websiteyadaan xun xun laakiin, waxaan magacaabi karnaa kuwa fiican. Sababta aynaan u rabin inaan magacawnana waxaa laga yaabaa inay jiraan, kuwoo aad ubadan oo weli anaga ka war haynin. Taas ayaa waxay sababi kartaan in nalo arko inaan bartilmaameed saneeno mid gaar ah oo ku waan aflaamta ama filimada hindi af somali laga daawado. Waxaa jira websiteyo badan oo laga daawan karo filmo hindi af somali fanproj. Waxaan halkaan idinku soo bandhigi doonnaa ku wa ugu fican oo aan wax dhib ah adiga iyo ciyaalkaaga uga imaaneynin. kuwaan oo hindi afsomali fiican aad kaheli karto waa mysomali.com,fanproj.net, hinafsom.net. waan ku sii kordhin doonnaa listigaan haday nagu soo kordhaan, kuwa fiican.